अस्थायी शिक्षकसँग झुक्यो सरकार, फेल भएकालाई पनि सुविधा र औषधि उपचार - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
अस्थायी शिक्षकसँग झुक्यो सरकार, फेल भएकालाई पनि सुविधा र औषधि उपचार
आवाज संवाददाता २४ श्रावण २०७४, मंगलवार
२४ साउन, काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा फेल भएकालाई पनि सुविधा दिन अर्थमन्त्रालयले सहमति जनाएपछि शिक्षा ऐनमा नवौं संशोधनको गृहकार्य सुरु गरिएको छ । अब ऐन संशोधन गर्दा परीक्षामा असफल हुनेलाई सुविधामात्र होइन औषधोपचार पनि दिने व्यवस्था गरिँदैछ ।
यसअघि परीक्षामा फेल भएकालाई सुविधा दिन नसकिने जवाफ अर्थले शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । त्यसको विरोधमा अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले आमरण अनसन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेपछि सरकार पछि हटेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा नवौं संशोधनको तयारी सुरु गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए ।नवौं संशोधन नभएसम्म आसन्न भदौ ३ गतेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सार्नुपर्ने र संशोधनपछि तत्काल नयाँ मिति तोक्नुपर्ने माग राखी संघर्ष समितिले यही साउन १८ गतेदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशन जारी राखेको छ ।
‘ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत संघर्ष समितिसँग निर्णायक छलफल भइरहेको छ,’ डा. लम्सालले भने ।
गत असार ९ गते शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिबीच भएको चारबुँदे सहमतिमा परीक्षा वा सुविधामध्ये एक रोज्नुपर्ने उल्लेख थियो । सोही सहमतिलाई शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा सम्बोधन गरिएको थियो । तर, शिक्षकहरुले परीक्षामा फेल भएकालाई पनि सुविधा र औषधि उपचारको माग गरेपछि पुुनः नवौं संशोधनको गृहकार्य गरिएको हो । शिक्षाले सुविधा दिनेबारे राय माग्दा अर्थले दिन नसकिने जवाफ दिएपछि ऐन संशोधन अन्योलमा परेको थियो । तर, सोमबार अर्थ मन्त्रालयले असफल हुनेलाई पनि सुविधा दिन र औषधोपचार रकमबारे थप छलफल गर्न सकिने व्यहोराको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले परीक्षा दिने वा ह्याण्डसेकसहित विदाई हुने विकल्प सरकारले अघि सारेको छ । सुरुमा परीक्षामा सहभागी हुनेहरुले फेल भए ह्याण्डसेकको सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पछि फेरि फेल हुनेहरुले पनि सुविधा पाउनुपर्ने माग शिक्षकहरुले राखेका छन् । सुविधा लिएर सेवाबाट विदा लिने भन्दै परीक्षा फारम नभरेकाहरु पनि अहिले नयाँ व्यवस्थापछि पुनः परीक्षा फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसैले आगामी भदौ ३ गतेलाई तोकिएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सार्नुपर्ने प्रमुख माग शिक्षकहरुको छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने, सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने, ७० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, भदौ ३ गतेलाई निर्धारित परीक्षा सार्नुपर्ने लगायत माग गरेका छन् । परीक्षा सार्नुपर्ने माग शिक्षक सेवा आयोगले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
परीक्षा रोज्ने १५ हजार, सुविधा रोज्ने १० हजार
देशभर करिब २६ हजार अस्थायी शिक्षक छन् ।
साभारः अनलाइन खवरबाट